Yangon Car Service - EasyAds Myanmar
Yangon Car&Cicycle Wash&Polish
ကားရေဆေး၊ ဆီထိုး၊ စက်ပေါ်လစ် ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်းမှ ကြိုဆိုပါတယ် ခင် ဗျာ။🚗🚕🚛🏍️🛵
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးကြီး 🚗🚗မော်တော်ကားနှင့် 🏍️🏍️မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို ထိခိုက်နှစ်နာမှု့ မရှိစေရန် Yangon Car&Cicycle Wash&Polish မှ အထူးဝန်ဆောင်မှု့ပေးပါရစေ ခင်ဗျာ။
လူကြီးမင်း မော်တော်ယဉ်ညစ်ပတ်နေပီးလား Yangon Car&Cicycle Wash&Polish ကိုသတိရလိုက်ပါ။
ရေဆေး၊ စက်ပေါ်လစ်၊ အင်ဂျင် အတွင်းခန်းဆေး၊ကားအတွင်းခန်းလျှော်၊မှန်ရေဂျိုးချွတ်ခြင်း၊ ဖယောင်းတင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု့များကို ပြုလုပ်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်Yangon Car&Cicycle Wash&Polish မှ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကားများကိုအောက်ပါအဆင့်များနဲ့လုပ်ဆောင်းပေးမှာပါ။
👉၁။ကားဘော်ဒီ ရေဆေး ခြင်း👈
👉၃။ကားအတွင်းခန်း kitတင်ပေးခြင်း 👈
👉၄။ကားအတွင်းခန်း ဖုန်စုပ်ပေးခြင်း 👈
👉၅။ကားမှန် မှန်ကြည်ဆေးဖြန်း သန့်ရှင်ခြင်း 👈👉၆။ကားတာယာ silicone သုပ်လိမ်းပေးချင်း👈
👉၂။အင်ဂျင်နှင့် အောက်ပိုင်း ဆီဖြန်းပေးခြင်း။👈
👉၃။တာယာ Silicone သုပ်လိမ်းပေးခြင်း။👈
ရေဆေးရာတွင်လည်း သာမန်ဆပ်ပြာဖြင့် မဆေးကြောပဲ colouring wax shampoo ဖြင့်သာဆေးကြောပေးပါသည်။
Colouring wax shampoo သုံးခြင်းအားဖြင့် ရေကြောင့်တင်ကျန်နေသော ရေဝါဂျိုးများ၊ အစက်အပျောက်များနှင့် အကွက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကားသို့မဟုပ် ဆိုင်ကယ် အရမ်းညစ်ပက်နေပြီး ရေဆေး ဆီထိုး ချင်သော်လည်း မအား မလပ်ဖြစ်နေပါက အိမ်အရောက်သန့်ရှင်း​ရေးလုပ် ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု့ကိုပါ ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ် ဗျ။ (ရန်ကုန် မြို့တွင်းသာ)။ အဲ့အတွက်လဲ ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်ပေးစရာ မလိုဘူး ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
💦💦Yangon Car&Cicycle Wash&Polish
ph no 09951167699
Yangon Car & Cicycle Wash & Polish
Car wash ဆီ ထိုး၊ Welcome to Machine Polishing Services 🚗🚕🚛🏍️🛵
Yangon Car & Cicycle Wash & Polish would like to provide special services to protect your precious နှင့် car and motorcycle ထိခိုက်️🏍️.
Do you think your car is dirty? Remember Yangon Car & Cicycle Wash & Polish.
Water paint Machine polish Engine interior paint, car interior wash, windshield wipers, We are now providing waxing services. Yangon Car & Cicycle Wash & Polish will repair your car with the following steps.
🚗🚗 If the car 🚗🚗
👉 1. Car body wash 👈
။ Wash the underside of the car 👈
။ 3. Car interior kit installation 👈
။ 4. Vacuuming the car interior 👈
။ 5. Car windshield cleaning 👈👉 6. Car tire silicone coating ချင်း
ဆိုင်ကယ်️🏍️ If it isamotorcycle 🛵🛵
ဆေး 1. Washing water 👈
အင်ဂျင်2. Engine and bottom oil spray
Silicone 3. Apply silicone rubber tires
When washing, do not wash with ordinary soap, but with colored wax shampoo.
By using coloring wax shampoo, you can get rid of watery residue. Prevents the formation of spots and blemishes.
💪💪💪 Asaspecial service 💪💪💪
Your car or motorcycle is very dirty and you want to refuel it, but if you are not available, we also provide home cleaning services. (Only in Yangon city). You do not need to pay extra for that.
AngYangon Car & Cicycle Wash & Polish
မဂ္လာပါ Yangon Car&Cicycle Wash&Polish ကားရေဆေး၊ ဆီထိုး၊ စက်ပေါ်လစ် ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်းမှ ကြိုဆိုပါတယ် ခင် ဗျာ။🚗🚕🚛🏍️🛵 လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးကြီး 🚗🚗မော်တော်ကားနှင့် 🏍️🏍️မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို ထိခိုက်နှစ်နာမှု့ မရှိစေရန် Yangon Car&Cicycle ...